भारतसँग युद्ध लड्न तयार छौं तर अपमान स्वीकार्य छैन — onlinedabali.com
जो चोर उसकै ठूलो स्वर । दादागिरीको नि सीमा हुन्छ ! बर्दीमा दिनडाहडै हाम्रो भूमि प्रवेश गरेर परेड खेल्ने, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कुटपिट गर्ने, नेपालीभूमि तिम्रो देशका नक्सामा समावेश गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्ताक्षेप गर्ने, जङ्गे पिलर रातारात सार्ने । अरे यार, हुँदाहुँदै हाम्रो भूमीमा अनुमती बिना तिम्रो फाइदाका लागि बाटो खन्ने ?
अनि हामीले हाम्रो भूमि आफ्नो देशको नक्सामा समेट्दा र मातृभूमिको विषयमा बोल्दा तिमिहरुको रोइलो किन ? नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अपमान गर्ने घिनलाग्दा कार्यले फोहोरको खाल्डोमा तिमिहरु आफै पर्नेछौं । अनि के नेपाली चेली मनिषाले तिम्रो अतिक्रमणलाई ठिक भन्‍नुपर्ने ? यो कदापी सम्भव छैन । नेपाली विश्‍वको जुन कुनामा पनि गएर श्रम र सीप बिक्री गर्न सक्छ तर शिर कहिलै झुकाउँदैन, राष्ट्रयतामाथि नै कसैले धावा बोले फर्केर रगत बगाउन तयार हुन्छन् । हामीले तिमिजस्तै कसैको गुलाम हुन जानेका छैनौं । आफू बेलयतको २ सय वर्षसम्म गुलाम भएजस्तै नेपालीलाई गुलाम बनाउन खोज्‍नु मुर्खता मात्रै हो ।
हेक्का रहोस् भारतीय साम्राज्यवादलाई भौगोलिक हिसाबले देश ठूलो र सानोको कुरा होइन, संख्याका हिसाबले सेना धेरै र थोरैको कुरा होइन यो त राष्ट्रियताको कुरा हो । आगो खाएर अङ्गर ओकाल्ने जनमुक्ति सेना जिउँदै छन् । अझ जन्मने क्रम जारी छ । हामीलाई मृत्यु स्विकार्य छ तर कसैको दासत्व स्विकार्य छैन । हाम्रा वीर पुर्खाले रगतले सिन्चेको देश प्राण भन्दा प्यारो छ । अन्याय गरि न त कसैको एक चिम्टी माफटो लिइन्छ न त दिइन्छ । सामन्ती र नवसामन्ती नेपाली दलाल नेताहरूको गुलामी ,गद्दार र लाचारपनको फाइदा उठाउदै नेपाली जनता अन्धाभक्त र डरपक हुन भन्ने भ्रममा परि हाम्रो भूमी किस्ताकिस्तामा हड्पने तिम्रा त्यो घटिया अहंकार आकाशतिर फर्केर थुक्नुजस्तै हो ।
नेपालीसँग सेना र हतियारको धाक नकहिलै नलगाउनु, यदि साँच्चै नेपाली जनता जागे भने तिम्रा १४.५ लाख सेनाका विरुद्ध हाम्रो ‘वटर बम’ कोशी ब्यारेज र भारतमै रहेका गोर्खा सैनिक दाजुभाई काफी छन् । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएको इतिहास छैन र हुँदैन पनि । अन्यायको नि हद् हुन्छ, तिम्रा नाङ्गो नाच अति भो । हामी नेपाली सधैं निरही भएर बस्दैनौं । हामी हाम्रो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताको साथै आत्मसम्मान र स्वाभिमानका निम्ति तिम्रा हेपाह प्रवृत्तिको विरुद्ध मृत्युको कुनै प्रवाह नगरी युद्ध लड्न तयार छौं तर दासता स्वीकार्य छैन ।
लेखकः बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष हुन् ।